I-OpenExpo Virtual Experience 2021, impumelelo ebingeyona iDeepFake | Kusuka kuLinux
UJoaquin Garcia Cobo | | I-GNU / Linux, Izaziso
I-OpenExpo Virtual Experience 2021 yenzeke ekuqaleni kwalenyanga njengoba besikutshelile. Umcimbi obonakalayo ubuyimpumelelo naphezu kokuthi ngemuva kobhubhane abantu abanakho ukwazisa okuningi ngemicimbi ebonakalayo njengoba babenzile ngaphambi kobhadane. Okuningi kwe- Izikhulumi eziyi-140 kanye nababekhona abangaphezu kuka-4000 bayayixhasa le mpumelelo Pero phakathi nezinsuku Sikwazile ukubona ezinye izimpumelelo ezingabonakali kangako kepha ezibaluleke njengokubakhona.
Isibonelo esihle salokhu yinkulumo ayinikeza UChema Alonso. Isazi esidumile sokuphepha kwe-cyber sikhulume nathi kulesi sehlakalo ngengozi enkulu yokuthi amele ama-deepfakes namuhla nasesikhathini esizayo.
Ukujula kuyinto ukuguqulwa kwevidiyo noma isithombe, ngenxa ye-AI, kubukeka sengathi umuntu wenza okuthile noma usesimweni esithile. Lokhu akubeki kuphela ubumfihlo nokuhlonishwa kwabantu kepha futhi kumelela ingozi ezinhlelweni ezisebenzisa ukubonwa kobuso njengendlela yokungena, okuvamise ukuthi kumafilimu amaningi kungukuphamba.
1 IDeepFakes ikhule kakhulu ngonyaka owedlule
2 I-OpenExpo Virtual Experience 2021 iqoqe ababambiqhaza abangaphezu kuka-4.000
IDeepFakes ikhule kakhulu ngonyaka owedlule
UChema Alonso wasixwayisa ukuthi lo mkhuba ukhula ngokugcwele futhi lokho kuyingozi. Kuze kube ngoJulayi 2019 inani le-DeepFakes elizungeza kwi-intanethi laliyi-15.000, ngemuva konyaka, inani lama-deepfakes lase lenyuke laya ku-50.000 XNUMX futhi kuyinombolo eqhubeka nokwanda. Okubi kakhulu ngakho ukuthi kuze kube manje, Ama-96% we-deepfakes ahambelana nokuqukethwe kocansi futhi agxile kubathonya nakubantu abadumile. Lokhu akukubi kangako ngoba laba bantu bavame ukuzungezwa othile, banempilo yomphakathi futhi kulula ukuphika nokuthola, kepha lokhu akusho ukuthi lobu buchwepheshe abunakusetshenziswa kwezinye izimo kanye / noma kubantu.
I-OpenExpo Virtual Experience 2021 iqoqe ababambiqhaza abangaphezu kuka-4.000
Njengoba sishilo kaninginingi, into enhle ngeFree Software wumphakathi owakhiwe nxazonke, futhi umbukiso kaChema Alonso uyisibonelo esihle salokhu.
Njengoba kunikezwe ukwesaba noma ukulimala okungadalwa yi-DeepFake, uChema ukhombisile ukuthi yiziphi izindlela ezingasetshenziswa ukuthola i-DeepFake: ukutholwa ngokuhlaziywa kwezithombe nokususwa kwedatha yezinto eziphilayo ezithombeni. Ngaphezu kwalokho, uChema uveze ukuthi uyasebenza i-plugin yeChromium ukuthi ngisebenzise lezi zimiso ukuze noma yimuphi umsebenzisi abone i-DeepFake kusuka kusiphequluli sabo.
I-plugin yeChromium isasebenza ekukhiqizeni kepha izosebenzisa amathuluzi alandelayo ukusebenza kahle: I-FaceForensics ++ (i-database ye-DeepFakes ezokhula njengoba sidlulisa amavidiyo noma izithombe ezisolisayo); Ukudalula Amavidiyo Ase-DeepFake Ngokuthola Izinto Zobuso Zokugoqa Ubuso (Njengoba i-DeepFakes yenza izithombe ezinokuxazululwa okuphansi kakhulu, leli thuluzi lihlola ukuthi isithombe sihambisana yini nesinqumo sangempela); Ukudalula amafake ajulile kusetshenziswa ukungahambelani kwekhanda (kubheka ukungahambelani kokumodela kwe-3D futhi ngenxa yemodeli yeThembaNet kwenziwa isheke lezibalo phakathi kwamavekthri ahlukene abaliwe); izithombe ezikhiqizwe yi-CNN kulula ukuzibona kalula… okwamanje (isithombe esenziwe phakathi ibhange lesisekelo le-CNN lezithombe futhi liyaseshwa uma isithombe esakhiwe sihlobene nalesi sizinda). Lokhu kuzokwenza i-plugin ye-Chrome osebenza kuyo ithuluzi elikhulu lokuphepha nethuluzi elizothuthukiswa umphakathi wakho.
Lokho esikubonile kwisethulo sikaChema Alonso kuyisibonelo nje salokho esingakuthola isiteshi se-OpenExpo YouTube, lapho sizothola khona ukurekhodwa kwezinkulumo, imicimbi kanye / noma izingqungquthela zomcimbi. Singathola ngisho imidlalo ye-trivia eyayidlalwa phakathi kwezipikha nokuthi abayeki ukuzijabulisa.
Asethembe ukuthi ngonyaka ozayo umcimbi awuzukuphindwa kuphela kodwa futhi kungaba mathupha futhi ube nokuthile online okwethu okungenakukwazi ukuba semodini yomuntu, okusho ukuthi, khipha izinto ezinhle emicimbini yomzimba nakwimicimbi eku-inthanethi.
Ukuqeda ngifuna thatha amagama ambalwa ashiwo uChema Alonso nokuthi kumele bacabange ngezinkinga zokuphepha kwamakhompiyutha: “lokhu kuqala ukuba ngokoqobo, isitayela se-Black Mirror. Uma singakwethembi esikubonayo, yini esele kithi?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-OpenExpo Virtual Experience 2021, impumelelo ebingeyona iDeepFake